Qul-qulka Qaxootiga Yamaniyiinta oo laga dareemayo Magaalo xeebeedyada Soomaaliya iyo Jabuuti.
Tuesday March 31, 2015 - 11:58:40 in Wararka by
Magaalo xeebeedyada Soomaaliya sida Barbara iyo Boosaaso iyo Xeebta dheer ee wadanka Jabuuti ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa gaaray dad kor u dhaafaya 60-ruux oo u dhashay Yemen kuwaas oo isaga soo cararay wadankaasi.
Qaxootigaani ayaa la sheegayaa in Dowladda Jabuuti ay iminka ku dadaaleyso Sidii ay u xakeyn laheyd qul-qulka Qaxootigaani.
Xeebaha Barbara iyo Boosaaso ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in ay gaareen qoysas Yamaniyiin ah kuwaa oo saarnaa doomaha lagu daabulo dadka Soomaalida ee gala Yemen.
Hay’adda qaxootiga u qaabilsan Q/M ee loosoo Gaabiyo UNHCR ayaa diiwaan galisay dad isugu jiray Soomaali iyo Yamaniyiin kuwaa oo isaga soo cararay wadankaasi iminka ay kusoo qul-qulayaan Soomaaliya.
Arintaani ayaa mid horay looga digay oo waxaa jira digniin loo jeediyey wadamada isbaheysiga ka dhanka ah Xuutiyiinta talada Yemen la wareegay waxaana loogaga digay in ay ku waxyeeloobaan dad aanan waxba galabsan balse loo bartilmaameedsado jinsiyad ahaan.
Wadanka Yemen waxaa kunool Kumanaan Soomaali ah kuwaa oo galay wadankaasi horaantii sagaashan meeyadii oo Soomaaliya xiligaasi waxaa ka jiray Colaado Sokeeye iyadoona dadka wadankaasi galaye ay aamin sanaayeen in ay halkaasi ku helayaan Nolol dhaanta midii wadanka ka jirtay.
Dowladaha isbaheysiga ee dagaalka ku Qaaday xuutiyiinta talada la wareegaya ayaa ah kuwo muwaadiniintooda kala baxay wadankaasi ka hor inta aysan duulaanka qaadin, hayeeshee Dowladda Soomaaliya ayaa isbaheysigaani ku biirtay iyada oo aanan dadkeeda kasoo daabulin Yemen.